Glass edging Machine, Glass Ugboro abụọ edging Machine, Glass Sandblasting Machine - SUNKON
Mepụta uru maka iko
SUNKON Intelligent Technology Co., Ltd., dị na Guangdong, China, nke nwere square mita 10000. Kemgbe e guzobere ya na 2012, anyị nọ na -agbaso teknụzụ mmepụta nke "lanarị site na ịdị mma na omimi site na aha ọma". Nọgide na-abawanye mmepe R&D.na chepụta igwe eji eme ihe nke ọma maka mkpa ahịa. Anyị nwere akụrụngwa nrụpụta ọkaibe, ngwa nyocha nke ọma, ike siri ike na arụpụta ihe. Anyị na-ekwe nkwa ịdị mma “efu”.
CGZ12325 Glass ogologo akara edging igwe bú ...
Igwe eji edezi nkume CGSC641
CGSZ2042 Glass igwe nwere ihu abụọ
CGX261P Glass Kwụ Ọhụrụ Line Beveling Machine w ...
Igwe ịsa ahụ iko CGQX 2500
CGPS-1600 Igwe eji akpacha ajị ajị anụ
CGYX1321 Igwe eji akpụzi ihe
Ụlọ ọrụ anyị na -ahụ maka nrụpụta igwe nhazi iko. Ọmụmaatụ: Igwe na -ahazi igwe kwụ ọtọ, igwe kwụ ọtọ, igwe kwụ ọtọ, igwe kwụ ọtọ igwe, igwe na -asacha iko, igwe na -asacha iko, igwe sandblasting na ihe ndị ọzọ. , imewe siri ike na arụpụta ihe. Anyị na -ekwe nkwa ịdị mma “efu”.
Teknụzụ siri ike, ngwaahịa zuru oke na ahụmịhe bara ụba. karịa afọ 10
Otu nyocha dị mma, na-enyocha ọkwa niile iji nye ndị ahịa ngwaahịa dị elu
Sistemụ njikwa zuru oke yana usoro ọrụ ịre ahịa mgbe niile na-ahụ maka ọrụ ndị ahịa n'oge na arụmọrụ
Ihe ngosi MEXICO
Ihe ngosi IRAN
Machị 10, 2021
Ngwongwo Nkume Nkume, Igwe eji edezi Nkume 45, Igwe na -agbanwe igwe na -agbanwe agbanwe, Igwe Miter Glass, Nkume Nkume 45 Degree Machine, Ngwa ụlọ Glass Edging Machine,